Global Aawaj | » रमजान पर्व भोलिदेखि शुरु रमजान पर्व भोलिदेखि शुरु – Global Aawaj
विराटनगर । इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको महान पर्व रमजान भोलिदेखि शुरु हुने भएको छ । नयाँ वर्षसँगै रोजा पर्व शुरु हुनु सम्भवत: यो पहिलो भएको बुढापाकाहरु बताउँछन् ।
यो पर्वमा एक महिनाभर मुस्लिम समुदायले बिहान सूर्योदय हुनुअघिदेखि सूर्यास्त नभएसम्म पानीसमेत खाँदैनन् । उर्दू क्यालेण्डर अनुसार बुधबार बिहान ४:१५ बजेबाट बेलुका ६:२० बजे सम्म निराहार बस्नुलाई रोजा भनिन्छ । रोजाको समय दैनिक सूर्य उदाउने र अस्ताउने समयसँगै समय तालिका पनि परिवर्तन भइरहन्छ । रोजा बस्न बिहान तोकिएको समय अगावै र बेलुका तोकिएको समयपछि आहार लिने गर्दछन् । रमजान उर्दू क्यालेण्डर अनुसार हिजरी सम्बत् १४४२ हो भने रमजान महिना नवौँ महिना हो । रमजान महिनामा नै मुसलमानको सबै भन्दा ठूलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको हो भने यो महिनामा अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास लिएको छ ।
दान दिनु गरीब र दीनदु:खीलाई सेवा गर्नु, जकात निकाल्नु यो महिनाको ठूलो विशेषता हो । रमजानान व्रत बस्न आज साँझ मुसलमानहरुले चन्द्रमा हेर्न आकाशतिर दृष्यावलोकन गर्ने र चन्द्रमा हेरेर औंधी रमाउने प्रचलन छ । सुनसरी चाँदबेलाका मोहम्मद इनुसले रमजान महिना हाम्रो लागि निकै महत्वपूर्ण एवं पवित्र हो र यसमा मुसलमानका पाँच आधार स्तम्भमा हज बाहेक सबै स्तम्भ पूरा हुने गर्दछ । शरीरलाई चोखो राखेर मात्र रोजा बस्नुपर्छ । कुलतमा लागेका मानिस एक महिना इमान्दारीपूर्वक रोजा बस्न सक्यो भने चुरोट, खैनी, गुट्खा आदि पदार्थ खाने बानीमा परिवर्तन आउन सकिने सुनसरी सोनापुरका हाजी मोहम्मद अब्दुलको भनाइ छ ।
होल्डिङ सेन्टर बनाउन बल्ल जग्गा भारतमा कोरोनाविरुद्ध नयाँ औषधिले पायो अनुमति स्वास्थ्य आपतकाल घोषणाबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भारतमा आएको चक्रवातको प्रभाव : हिमाली क्षेत्रमा उच्च वेगको हावाहुरीको सम्भावना, पर्वतारोहण नगर्न आग्रह चक्रवातका कारण भारतमा १२ जनाको ज्यान गयो, एक लाख ५० हजार जना विस्थापित बुटवलमा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी रेष्टुरेण्ट संचालन गर्दा २७ हजार ३ सय जरिवाना ! विवाहको एकमहिना नपुग्दै होटलमा मृत फेला परिन् रुपा यो कस्तो विडम्बना ! रुपन्देहीका एक गाउँपालिका अध्यक्ष आँफैले संक्रमितको शव उठाई व्यवस्थापन गरे लुम्बिनीमा जसपाका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १६ संक्रमित महिलाले सल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माए कोरोनाबाट वडाध्यक्षको निधन ९ हजार २४७ जनामा संक्रमण, ५ हजार ७६७ निको, २१४ को मृत्यु पत्रकारहरुको अभियानमा परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा एक करोड रुपन्देहीमा संक्रमितको संख्या घट्दै,परीक्षण गरिएका २८ प्रतिशतमा मात्रै संक्रमण रोटरी भैरहवाद्वारा आइसोलेशन सेन्टरलाई करिब ५ लाखका स्वास्थ्य उपकरण सहयोग शव व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि : ‘रोबो भ्यान’ बन्दै एकता र विभाजनको चक्रबीच मदन–आश्रित स्मृति दिवस कैदीबन्दीहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री कोरोना कहरले सुत्केरीलाई सास्ती !